के यो हुन सक्छ ?
By SuRaJ... love Begins HERE - August 19, 2009
बाइबलका ती बचनहरुलाई आफ्नो मुखबात अध्यन गर्दा कहिले काही मलाई यस्तो पनि लाग्दथ्यो की
के बाइबल का बचन हरु हाम्रो जीवनमा साच्चै पुरा हुन्छन् र?
येशुप्रभु हाम्रो संसारमा आएर हामीलाई पाप बात त बचाउनु भयो,
तर के मानिषको जीवनमा परिवर्तन हुन्छ र ?
स्वर्गबाट आएको बाणीले सावलको रूपलाई पावलमा परिवर्तन गरिदियो
अनि पावल आफैमा माहान राज्यको प्रचारमा अघि बढे
तर के आजको संसारमा यस्तो हुन सक्छ र?
यहाँ येशु को चेलाहरू ले मानिस लाई जीवंत बचन सुनाउन निक्कैनै भेदभाव सहनु परेको छ
यस्तो समय मा के यो संभव छ र की हात हतियार बोकेर हिदेको मानिष प्रभु को राज्य मा काम आउन सक्छ
के हजूरहरुसंग कुनै यस्तो उधारण छ?
मसंग छ ।
अनि यसलाई पढेर तपाईहरु मा पनि परिवर्तन आउने छ